Pixelorama: Maimaim-poana, Misokatra, Mpanonta sary 2D Cross-Platform | Avy amin'ny Linux
Eny, maro amintsika izay liana amin'ny teknolojia no manana zavatra itovizana, na lehibe na kely, dia tsiron'ny hatsaran-tarehy izany. pixel art(na pixel art, amin'ny teny anglisy)indrindra fa ireo ampiasainay GNU / Linux ary ny azy CLI tontolo iainana anjakan'ny fampiasana ny Terminal.
Noho izany, eny hatramin'ny mbola kely ianao na tianao amin'izao fotoana izao sary mitovy amin'ny lalao video taloha amin'ny solosaina, console lalao ary finday, avy eo ny pixel artizay fomba fanoharana nomerika nostalgique sy retro 8 bit style, Ho tianao izany. Ary ity fitaovana lehibe ity dia tena ilaina ho anao amin'ny Rafitra fandidiana misy anao ankehitriny, na izany aza Windows, macOS na GNU/Linux.
Pinta: Inona no vaovao amin'ity fampiharana fanovana sary maimaim-poana ity?
Ary toy ny mahazatra, alohan'ny hidirana amin'ny lohahevitra androany momba ny mahasoa sy mahaliana fampiharana fitantanana media, ary indrindra momba ny "Pixelorama", avelao ho an'ireo liana ireto rohy manaraka ireto ho an'ny sasany Lahatsoratra mifandraika. Amin'ny fomba ahafahan'izy ireo mikaroka azy ireo mora foana, raha ilaina, rehefa avy namaky ity boky ity:
“Pinta dia fampiharana fanitsiana sary tsotra sy mahasoa izay vao haingana no nohavaozina ho version 1.7.1. Fanampin'izay, programa loharano maimaim-poana sy misokatra izy io izay mikendry ny hanome fomba tsotra nefa mahery vaika amin'ny fampiasana sary amin'ny Linux, Mac, Windows, ary *BSD. Pinta: Inona no vaovao amin'ity fampiharana fanovana sary maimaim-poana ity?
MyPaint: fampiharana sary izay mampiroborobo ny famokarana
1 Pixelorama: Fitaovana famoronana kanto piksel maimaim-poana sy misokatra
1.1 Inona no atao hoe Pixelrama?
Pixelorama: Fitaovana famoronana kanto piksel maimaim-poana sy misokatra
Inona no atao hoe Pixel Art?
Ho an'ireo izay tsy dia mahalala loatra ny zavatra resahina, ny Pixel Art Izany dia endrika kanto nomerika, noforonina tamin'ny alalan'ny solosaina mampiasa programa fanovana sary raster, aiza ny sary namboarina tamin'ny haavon'ny piksel. Ary tahaka ny misy azy hexes, izay mihidy sy andoavam-bola ho an'ny Windows; misy "Pixelorama", izay misokatra sy maimaim-poana ho an'ny GNU/Linux.
"Teraka tamin'ny taona 1970 ny kanto Pixel, na dia tena manjavozavo aza izany tamin'ny voalohany raha oharina amin'ny zavakanto nomerika ankehitriny. Ny kanto piksel na ny kanto piksel dia karazana zavakanto nomerika izay toa noforonina niniana natao mifototra amin'ny fandaminana ny piksel. Ny bloc tsirairay dia kapoka borosy; ary, miaraka, ireo vondrona piksel dia mamorona ampahany iray manontolo. Amin'izany fomba izany, ny kanto piksel dia manana kalitao mitovy amin'ny mosaika; mosaika maro no mamorona sary misy endrika kely, tena mitovy amin'ny zavakanto piksel". Inona no atao hoe Pixel Art?
Inona no atao hoe Pixelrama?
Araka ny anao tranokala ofisialy, ity fitaovana nomerika ity dia nofaritana fohy toy izao manaraka izao:
"Izy io dia mpanonta sary 2D (sprite) maimaim-poana sy misokatra, natao tamin'ny motera Godot, mampiasa GDScript. Misy amin'ny Windows, Linux, macOS ary mivantana amin'ny Internet".
Anisan'ireo endri-javatra misy azy ankehitriny isika dia afaka manonona ireto manaraka ireto:
Maimaim-poana sy malalaka izy io. Ary amin'izao fotoana izao dia ao amin'ny kinova 0.9.2, navoaka tamin'ny daty, 21/01/22, miaraka amin'ny habeny eo anelanelan'ny 16 MB (ho an'ny Windows sy Linux) ary 32 MB (ho an'ny macOS).
Ahitana fitaovana 16 samihafa izy io mba hanamorana ny asa fanaovana sary, izay azo omena amin'ny bokotra havia sy havanana ihany koa.
Manana ny fandaharam-potoanan'ny animation azy manokana izy io. Mahatonga ny miasa amin'ny sela tsirairay, izay ny sela tsirairay dia manondro sosona sy rafitra tokana. Manohana ny hoditry ny tongolo, ny fampifandraisana sela, ny sary mihetsika, ary ny fanakambanana frame misy marika.
Manana borosy mahazatra izy io, anisan'izany ny borosy kisendrasendra. Ary mamela anao hamorona na manafatra palette mahazatra.
Mamela ny famenoana lamina. Noho izany, azonao atao ny mampiasa ny fitaovana siny mba hamenoana faritra iray amin'ny lamina tianao.
Mamela ny fanafarana sary sy ny fanontanany izany. Ary koa, raha misy rakitra maromaro nafarana, dia ampiana ho frame animation tsirairay. Azo atao koa ny manafatra takelaka sprite.
Manondrana asa vokarina ho rakitra PNG na GIF. Azo atao ihany koa ny manondrana azy ireo ho takelaka sprite.
Ahitana fomba fahalavorariana piksel ho an'ny tsipika tonga lafatra, ho an'ny pensilihazo, famafana ary fitaovana fanamaivanana/maizina.
Manana fanohanana autosave izy io, miaraka amin'ny famerenana ny angon-drakitra raha sendra lozam-pifamoivoizana.
Ampifanaraho, amboary, ahodina, avadika, avadika loko, amboary ny HSV, amboarina, ary asio contour sy gradient ny sarinao. Anisan'ireo endri-javatra lehibe maro hafa.
Ary ny tsara indrindra dia ny mety ho izany alaina sy apetraka mora, na ampiasaina an-tserasera amin'ny alalan'ireto manaraka ireto rohy.
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny pixelrama azonao atao ny mijery ireto rohy manaraka ireto: Godot, Snapcraft, Flathub, ary raha te-hahafantatra safidy malalaka sy malalaka ianao dia tsindrio ity rohy hafa ity: AlternativeTo.
"Ny tanjona faratampony amin'ity programa ity dia ny hahatongavana amin'ny eritreritry ny mpampiasa sy hanampy azy hamorona karazana kanto piksel izay tiany. Mety ho tontolo mangatsiatsiaka, animation mangatsiatsiaka, sary lalao, sketsa kisendrasendra, na meme pixel voahevitra tsara.". Antontan-taratasy ofisialy
Raha tsorina "Pixelorama" Izany dia fitaovana fanaovana sary mahafinaritra, maimaim-poana sy misokatra, izay hanamora ny fahafahan'ny maro, na manam-pahaizana manokana amin'ny sehatry ny fanaovana sary, na tsy mahay mamorona sary tsara tarehy eo ambanin'ity sary mahafinaritra ity. Fomba retro 8 bit. Na, ohatra, ianao te-hamorona sary ho ampiasaina ho logos amin'ny terminal, na hamokatra kisary fandaharana, wallpapers tsara tarehy. Ary mandra-pahatongan'ny famoronana nomerika pixelated mahafinaritra, izay azo avadika ho NFTs sarobidy, ao anatin'ny sehatra toy ny OpenSea.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Pixelorama: Maimaim-poana, Misokatra, Mpanonta sary 2D Cross-Platform
GPT-4: Ny fanodinana fiteny voajanahary an'ny OpenAI AI dia mety ho tonga amin'ity semester ity
Ny dikan-teny vaovao an'ny LXQt 1.1 dia efa navoaka, fantaro izay vaovao